Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota Oromoo sirna Woyyaaneen ukkaamfamani bakka buteen isaani dhabame. });
Maqaa hooggantoota fi qabsaa’ota keenya sirna kanaan ukkaamfamanii dhabamsiifamanii 200 kunooti. Maqaa kana yeroo adda addaatti walitti qabeen kuusaa ture. Amma koreen dhimma hooggantoota keenya kanaa qoratee eessa akka jiran adda baasu hundeeffamuu waanan dhaga’eef hubannoo yoo qabaatame gaariidha jedheen yaada.
He had been living in Finfinnee from 1994. In July 1995, Jirenya and Temesgen were abducted by government security men when walking near “Urael Church” in Finfinnee. According to eyewitnesses, they were first taken to a place called “horse house” behind the 1st Police Station, near to Menelik II hospital. After a month there, they were taken for a few days to the criminal investigation centre. Since then, they have been untraceable
Amantii Abdiisaa Jigii jedhama. Bara 1970 Lixa Oromiyaa aanaa Mana Sibuu ganda Rigaa Sacciitti dalate. Hagayya 20 bara 2000tti Naairoobii deemuuf erga xayyyra seenee booda humna eegumsa dirree buufata xayyaaraa Booleetiin gadi buufamee ukkaamsame. Erga sanaa kaasee hamma yoonaatti achi buuteen isaa hin beekamu. Amantiin barnootaan jabaa fi hayyuudha. Digrii lammaffaadhaan (Masters Degree) biyya Ingliziitii eebbifame. Saba isaa tajaajiluuf jecha jireenya sadoo lagatee yeroo hamaa keessa sodaa tokko malee biyyatti deebi’e. Barbaacha Amantii irraatti jarmayoota fi mootummoota hedduutu hirmaate. Jarmayaan Dr Trevor Truman (Oromia Support Group), International Red Cross, Amnesty International, Mootummaa Inglizii, barattoota University East Anglia, akkasumas namootaa fi dhaabota hedduutu barbaade, barbaadaa jirus. Hamma Amantii fi kanneen haala adda addaatiin ukkaamsaman haalli isaanii beekamutti, hamma dhugaan mul’atutti barbaansii fi qabsoon keenya hin dhaabbattu.
Abbaa Nashaa Husein, bara 2000 magalaa Finfinnee keessaa warana wayyanetiin qabamee, amma ammatti bakki ga’e hin beekkamu.
Sirneessaa Galataa Sambatoo jedhama. Qabsaa’aa Oromoo ture. Oromiyaa Dhihaa Aanaa Noolee Kaabbaatti dhalatee guddate. Bara 1984 A.L.I. akkuma baheetti as buuteen isaa dhabamee. Oromoonni keessaa fi ala jirtan nuuf iyyaafadhaa! jedhum maatiin isaa.
““Akkuma hundi keenyi beeknu #Sabboontonni #Oromoo hedduun bara 1991 irraa jalqabee yeroo adda addaatti mootummaa wayyaaneetiin ukkaamfamanii kan maatii fi firri jiraachuu fi boqochuu isaanii hin beekne hedduu dha. Isaan keessaa tokko barsiisaa kabajamaa fi quuqama sabaa qabu; kan haqaaf dhaabbatu barsiisaa #MargaaTarfaa Godina Horroo Guduraa Wallaggaa mana barumsaa Gitiloo irraa isaan keessa tokko. Mee haa iyyaaffannu!! Margaa Tarfaa qabsaa`ota Oromoo kanneen akka #Milkeessaa Gadaa fi #Araarsaa Assabaa warra bara kudha sagal sagaltamoota keessa Wallaggaa naannoo Horrootti wareegaman waliin kan ture dha. Margaa Tarfaa haalli yeroo sanaa ulfaataa waan tureef gara Ameerikaatti balali`uuf haalli hundi xumuramee qophii irra osoo jiruuti halkan sana magaalaa Finfinneetti human tikaa wayyaaneen kan butame. Egaa yoo lubbuun jiraate ykn yoo du`ee tahes karaa Social media kana akka iyyaafatamu waan dandeessaniin nu gargaaraa adaraa !!!””
Jaal Bareentoo Boruu (Husseen Ahmad Alii) Abbaa isaa obbo Ahmad Alii Boruu tii fi haadha isaa Aadde Mardiyaa Yuusuf Dibloorraa Goodina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo Ganda baqqalootti dhalate.
Akkuma Baruumsa isaa xumureen sirna mootummaa dargii keessatti yeroo gabaabaa keessatti Araddaarraa hanga Goodinaatti hooggansa adda addaarra tureera. Haaluma kanaan naannoo bara 1972 ALI tti Bulchaa Aanaa ciroo (የጭሮ ወረዳ ገበሬ ማህበር ሊቀመንበር) ta’uudhaan akkasumas naannoo bara 1975 ALI itti Aanaa Bulchaa Goodina (kutaa biyyaa) Harargee (የሀረርጌ ክፍለ ሀገር ምክትል ሊቀመንበር) ta’uudhaa hoojjachaa osoo jiruu bara 1976 ALI keessa qabamee dhaaba ABO wajjiin Hariiroo qabda jedhamee waggaa 3(sadii) oliif mana hidhaa Hararitti erga hidhamee booda naannoo 1979 ALI hidhaadhaa bahee yeroo muraasa erga turee booda qaama guutuudhaan qabsoo ABO tti dabalame. Haaluma kanaan jalqabarratti Bulchaa konyaa Malkaa balloo ta’uudhaan magaalaa Harawaacaa turee yeroo muraasa booda immoo gara magaalaa Dadar ol dhufuudhaan miseensa koree giddu galeessa ABO akkasumas itti Aanaa fi barreessaa Jaal Nadhii Gammadaa ta’uudhaan hoojjachaa tureera. Haa ta’uu malee bara 1995 irraa eegalee achi buuteen isaa hin beekkamne. Akkuma waahillan isaatti Mana hidha keessa akka jiru odeeffannoo hedduutu jira. Kanaaf yoo mana hidhaa wayyaanee jiraates isaa fi Hidhamtoonni siyaasaa hafan hundi akka nuuf hiikaman jechaa yoo iddoo biraa jiraates namni odeeffanoo qabdan nuu gargaaraa isiniin jenna maatiin isaa
“Beeksisa Caalchisaa jedhama. Dhalataa Xiqur Incinnii (Dirree incinnii) ti. As buuteen isaa hin beekkamu. Obboleessa isaa Eebbisaa Caalchisaa Wayyaaneen bara 1992 ajjeeste.
Osoo harmeen keenya yoom dhufa jettee karaa eegduu gaddi biraallee dabalame. Gammachiis Caalchisaa fi Waaqumaa Caalchisaa rasaasaan ammas rukutamuun mullate. Waaqumaa akka lukki isaa citu yoo murtaa’u harmeen keenya battalatti of ajjeesan. Gammachiis yeroof biyya ambaatti baqatee jira. Beeksisaan eessa jiraa?”